ए.आई.बि.टी.ले दियो विद्यार्थीलाई पाँच बिकल्पका बाटाहरु l – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
अध्ययनका लागी नेपाली विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाइमा यतिखेर अस्ट्रेलिया पर्दछ । यसै क्रममा नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेको “अस्ट्रेलिया इन्स्टिच्युट अफ बिजिनेस एन्ड टेक्नोलोजी” ए.आई.बि.टी. कलेजको घटनाले अस्ट्रेलियाप्रती सरोकारवालाहरुको चिन्ताजनक चासो बढेको छ। यसै घटनाका बारेमा ए.आई.बि.टी. कलेजले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको सहजताका निम्ती ५ बुंदाको अप्सनल छनोट अवसर तय गरेको छ । लिखित वक्तव्य सहितको सामाधानको बाटोको जानकारी युक्त सुचना-पत्रले अन्योलतालाई चिर्ने एक प्रायस गरेको छ। छ। जसको सार यहाँ प्रस्तुत छ ।
डिप्लोमा नर्सिङ-सेप्टेम्बर र ओक्टोबर २०१७ इण्टेक समुहका विद्यार्थीहरुलाई विकल्पका बाटाहरु ।
ए.आई.बि.टी. बाट रिलिज हुने सम्बन्धमा ।
जसमा सामान्य बैधानिक प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने छ । यसका लागी normal release procedure हेर्नका निम्ती ए.आई.बि.टी.ले अनुरोध गरेको छ ।
ANMCA अक्क्रीडीटेड डिप्लोमा अफ–नर्शिङमा ट्रांस्फर गर्ने सम्बन्धमा ।
आई.ई.एल.टि.एस.मा हर ब्यान्डमा ०७ वा सो-सरह प्राप्त विद्यार्थीहरुलाई आर.पि.एल.का आधारमा कागजी प्रकृया पुरा गर्न ए.आई.बि.टी.ले सहयोग गर्ने छ । यदी विद्यार्थीहरुले एसेस्मेन्ट सब्मिट गरेको छैन भने क्रेडिट ट्रान्स्फर प्रकृया स्वत बिफल हुनेछ । टिउसन-फि तिरेको वा तिर्न बाकीसंग अर्को कलेजको सुल्कसग सामन्जस्य गराइने छ ।
डिप्लोमा अफ कम्युनिटी सर्भिस प्याकेजमा ट्रन्स्फर सम्बन्धमा ।
आई.ई.एल.टि.एस.मा ०६.५ वा एभरेजमा सो-सरहका विद्यार्थीहरुको कोर्स-फि मा $१६,००० घट्नेछ भने ए.आई.बि.टी.को डिप्लोमा अफ कम्युनिटी सर्भिस प्याकेज – २ बर्षेमा रुपान्तरित हुनेछ। $१६,००० भन्दा बेसी रकम बुजाएका विद्यार्थीहरुको रकम हर-हिसाब गरी कोर्स-फि को तत्कालिन मिती र बुझाएको रकम, समय अवधी बिच समान्जस्यता गरेर मात्र फिर्ताको लागी योग्य ठहर्ने छ ।
जसले २ बर्षे डिप्लोमा प्राप्तिमा छिटो सँगै आर.एन. बन्नकालागी युनिभर्शिटीतर्फ जान सहजता प्रदान गर्छ ।
ए.आई.बि.टी. सेलेक्टेड ANMCA अक्क्रीडीटेड प्रोभाईडरहरुमा ट्रन्स्फर गर्ने सम्बन्धमा ।
विद्यार्थीहरु जसलाई हर ब्यान्डमा आई.ई.एल.टि.एस.मा ०७ वा सो सरह ल्याउछु भन्ने बिस्वास छ, उनले तोकिएको मिती भित्रमा ०७ वा सो सरह प्रप्त गरेमा ए.आई.बि.टी.ले विद्यार्थीलाई बिना थप सुल्क छनोट अनुरुपको ANMCA अक्क्रीडीटेड ट्रान्स्फर गर्ने छ ।
डिप्लोमा ओफ नर्शिङ ए.आई.बि.टी.कै आर्ममा पुरा गर्ने सम्बन्धमा ।
विद्यार्थीहरुले ए.आई.बि.टी.मा नै आफ्नो पढाई गरेर युनिभर्सिटी जादा कुनै एक सेमेस्टरको पनि क्रेडिट नपाएमा ए.आई.बि.टी.ले एक पटकलाई मात्र $ ७,०००/- सम्मको पेमेन्ट युनिभर्सिटीलाई आफैले गरी दिने छ। जसकालागी विद्यार्थीहरुले बैधानिक र पुस्ठीसँगत काग्जात पेस गर्नुपर्ने छ।
यसलाई अझ स्पस्ट बुझ्न तलको ए.आई.बि.टी. ले निकालेको पत्र समेत हेर्न सकिने छ।
यसै घटनासग सम्बन्धित जान्कारी र सुचना अप्डेटका लागी ए.आई.बि.टी.ले इमेल, सम्पर्क ब्यक्ती, स्थसन र सम्पर्क नम्बर समेत उपलब्ध गरएको छ ।
किरिया खर्च छैन: लक्ष्मण विकको १३ दिने संस्कार तीन दिनमै l
कञ्चनपुरमा सैनिक जवानद्वारा आत्महत्या l